ယုံကြည်စိတ်ချစရာမလိုဘဲယုံကြည်မှုကင်းမဲ့သောကွန်ယက်တစ်ခုဖြစ်သည် - Cazoo
ပင်မစာမျက်နှာ » ပင်မစာမျက်နှာ » ယုံကြည်စိတ်ချစရာမလိုပဲယုံကြည်စိတ်ချရသောကွန်ယက်တစ်ခုဖြစ်သည်
tag ကို: ပိတ်ပင်တားဆီးမှု Chain, ဗဟိုစနစ်များ, ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချစနစ်များ, မယုံဘူး
စနစ်တစ်ခု မယုံဘူး ဆိုလိုသည်မှာပါဝင်သူများသည်အချင်းချင်းအလုပ်လုပ်ရန် (သို့) စနစ်အတွက်အလုပ်လုပ်ရန်အတွက်တတိယပုဂ္ဂိုလ်ကိုယုံကြည်ရန်မလိုအပ်ပါ။ ယုံကြည်မှုအတွက်လိုအပ်ချက်မရှိဘဲပတ်ဝန်းကျင်၌ စနစ်အပေါ်အခွင့်အာဏာရှိပါတယ်တစ်ခုတည်းသော entity မရှိပါ ၀ င်သူများသည်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး သိရန် (သို့) ယုံကြည်ရန်မလိုဘဲသဘောတူညီမှုကိုရရှိသည် လျှင်မစနစ်ကိုယ်နှိုက်၏.
peer-to-peer (P2P) ကွန်ယက်တွင်ယုံကြည်မှုကင်းမဲ့ခြင်း၏မူလပိုင်ဆိုင်မှုကို Bitcoin မှစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပြီး၎င်းသည်အရောင်းအ ၀ ယ်အချက်အလက်အားလုံးကို စိစစ်၍ blockchain အများပြည်သူ။
ယုံကြည်မှုသည်အရောင်းအ ၀ ယ်အများစုတွင်တည်ရှိပြီးစီးပွားရေး၏အဓိကကျသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူယုံကြည်မှုမလိုအပ်သောစနစ်များသည်အဖွဲ့အစည်းများသို့မဟုတ်အခြားတတိယပါတီများထက်လူများအားစိတ္တဇသဘောတရားများကိုယုံကြည်ရန်ခွင့်ပြုခြင်းဖြင့်စီးပွားရေးအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုများကိုပြန်လည်အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ရန်အလားအလာရှိသည်။
အရေးကြီးသော“ ယုံကြည်မှုကင်းမဲ့သော” စနစ်များသည်ယုံကြည်မှုကိုလုံးဝဖယ်ရှားပေးသည်မဟုတ်၊ သူတို့ကဖြန့်ဝေ အချို့သောအပြုအမူတွေကိုအားပေးတဲ့စီးပွားရေးအမျိုးအစားတစ်ခုမှာပါ။ ဤအခြေအနေမျိုးတွင်ယုံကြည်မှုအားလျော့နည်းစေပြီးဖယ်ရှားပစ်ခြင်းမရှိဟုပြောခြင်းသည် ပို၍ မှန်ကန်သည်။
I ဗဟိုစနစ်များ ငါမဟုတ်ဘူး မယုံဘူး ပါ ၀ င်သူများအနေဖြင့်ပါဝါကိုစနစ်၏ဗဟိုအချက်အလက်သို့လွှဲအပ်ပြီးဆုံးဖြတ်ချက်များချရန်နှင့်ပြenfor္ဌာန်းရန်လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ဗဟိုစနစ်တွင်ယုံကြည်စိတ်ချရသောတတိယပါတီကိုသင်ယုံကြည်နိုင်သရွေ့စနစ်သည်ရည်ရွယ်ထားသည့်အတိုင်းအလုပ်လုပ်လိမ့်မည်။ သို့သော်စိတ်ချရသောအဖွဲ့အစည်းသည်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုမရှိပါကဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သောပြseriousနာများ၊ လေးနက်သောအရာများကိုပင်သတိပြုပါ။ ဗဟိုစနစ်များသည်စနစ်ချို့ယွင်းမှုများ၊ အများပြည်သူ၏ခွင့်ပြုချက်မရပဲဒေတာများကိုဗဟိုအာဏာပိုင်များကလည်းပြောင်းလဲပစ်နိုင်သည်။
ငါယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်လေးလေးနက်နက်နှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသော Binance တူသောဗဟိုစနစ်အားယုံကြည်ပါတယ်။ သင် Binance ဆိုတာဘာလဲနှင့်မည်သို့အသုံးပြုရမည်ကိုနားလည်ရန်ဤလမ်းညွှန်ကိုဤနေရာတွင်ဖတ်ရှုနိုင်သည်။ သင် Binance တွင် cryptocurrency ဝယ်ချင်ပါသလား။ ကောင်းပြီ, အောက်ပါခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်၎င်းကိုသင်ရရှိလိမ့်မည် ကော်မရှင်အပေါ် 20% လျှော့စျေး, အစဉ်အမြဲ! ဘာလို့မဖြစ်ရမလဲ?
BINANCE အပေါ် CRYPTOCURRENCIES ဝယ်ပါ
ယခုအတွေးအခေါ်ကိုနည်းနည်းလောက်လေ့လာကြည့်ကြပါစို့၊ ငါနဲ့အတူဆက်ပါ။ ပိုက်ဆံနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုရှိတဲ့စနစ်တွေဟာဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားသည့်စနစ်များထက်ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောဆွဲဆောင်မှုရှိနိုင်သည်။ မယုံဘူးလူများသည်စနစ်များထက်အဖွဲ့အစည်းများအပေါ်ယုံကြည်မှုရှိခြင်းကို ပို၍ ပျော်ရွှင်တတ်သည်။ သို့သော်အဖွဲ့အစည်းများသည်အလွယ်တကူလာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှုများပြုလုပ်ထားသော်လည်း ယုံကြည်မှုအတွက်မလိုအပ်ဘဲစနစ်များကိုကွန်ပျူတာကုဒ်ဖြင့်လုံးဝအုပ်ချုပ်နိုင်သည်.
Bitcoin နှင့်အခြား Proof of Work blockchains များသည်သူတို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုကိုရရှိသည် မယုံဘူး ရိုးသားသောအပြုအမူများအတွက်စီးပွားရေးမက်လုံးပေး။ ကွန်ယက်လုံခြုံရေးကိုထိန်းသိမ်းရန်ငွေကြေးမက်လုံးတစ်ခုရှိသည်နှင့်ယုံကြည်မှုသင်တန်းသားများကိုအကြားဖြန့်ဝေ။ ၎င်းသည် blockchain အားအဓိကအားဖြင့်အားနည်းချက်များနှင့်တိုက်ခိုက်မှုများကိုခံနိုင်ရည်ရှိစေသည်။
ယခင်ဆောင်းပါးအဆိုပါ Blockchain ၏သမိုင်း
Cryptocurrencies ၏ကမ္ဘာပေါ်မှာ Flippening ကဘာလဲ?